Yethulwe ngelikhulu isasasa iSiyagcinwa Widows Forum eMlazi | Isolezwe
Yethulwe ngelikhulu isasasa iSiyagcinwa Widows Forum eMlazi
Isolezwe / 26 July 2012, 10:28am / BONISWA MOHALE
UKUFELWA ngumyeni akusho ukuphela kwempilo, lona kube ngumyalezo obuqondiswe kubafelokazi ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inhlangano yabo eMlazi.
Le nhlangano ebizwa ngeSiyagcinwa Widows Forum yethulwe ngesasasa ehholo lakwa-V, eMlazi.
USihlalo wale nhlangano uNkk Antana Gumede, uthe inhloso yabo ngukukhombisa nokugqugquzela abafelokazi ukuthi impilo iyaqhubeka noma esehambile umyeni. Uthe bazocobelelana ngolwazi, bathobane amanxeba bese bebuye becaba indlela eya phambili.
“Sizosebenzisana nezinhlangano ezahlukene ukuze sisize amalungu ethu. Inhlangano yethu yenzelwe wonke umuntu oshonelwe ngumyeni. Angeke sigcine ngokuthobana amanxeba kodwa sizobuye size nezinhlelo zamabhizinisi ngoba sonke sinenkinga yezimali,” kusho uNkk Gumede.
Amazwi akhe enanelwe nguNkk Lindiwe Ndimande okhulumela le nhlangano njengoba ethe ngisho nasezindaweni ezisemakhaya izoba khona.
Uye waveza ukuthi esikhathini esiningi abafelokazi kabawazi amalungelo abo, baye bathi ngoba sekushone abayeni bahlale phansi bangazi ukuthi benze njani.
“Sifuna basukume, bayothola ulwazi ezikhungweni ezahlukene. Isibonelo nje, abanye abakwazi ngisho ukuyoxhumana noMnyango wezoBulungiswa ongabasiza ekutholeni izimali zabayeni babo. Sifuna umuntu oshonelwe ngubaba wekhaya azi ukuthi akuqali ngaye futhi impilo iyaqhubeka, inqobo nje uma enolwazi olufanele,” kusho uNkk Ndimande.
Kulo mcimbi abesifazane bebegqugquzelwa ukuba bakhuleke futhi kufundwa namazwi aseBhayibhelini.
Bekukhona nelungu lePhalamende uMnuz Chris Ntuli ohalalisele abesifazane ngokuvula le nhlangano esho nokuthi kufanele bonge imali uma befuna ukuphumelela.
Akuyena kuphela obacobelele ngolwazi kodwa bekukhona noMnuz Thanda Madlala we-SEFA, oveze ukuthi le nhlangano akukho engakwenzeli usomabhizinisi osathuthuka inqobo nje uma ibhizinisi lakhe noma isu lakhe lebhizinisi likhombisa ukuthi lizophumelela.